Home Wararka Hay’adda USAID ee kaalmada oo ku eedeysay Xaliimo Yareey ku takrifalka Gudiga...
Hay’adda USAID ee kaalmada oo ku eedeysay Xaliimo Yareey ku takrifalka Gudiga Doorashadda
Hay’adda Maraykanka ee kaalamada bixiso oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano USAID aya warbixin ay soo saartay ku sheegtay in Gudoomiyaha Gudiga ee Madax Banaan Doorashada Qaranka Xaliimo Ibraahim oo loo yaqaano Xaliimo Yareey ay si shaqsi ah ay ugu takrifashay Gudiga aya Gudoomiyaha u tahay. Waxaa lagu eedeeyay Xaliimo Yareey in ay Gudiga iyo dhaqaalaha soo galaba ay u isticmaashay si shaqsi ah isla markaana ka dhigatay Gudiga iyo howshiisaba hanti ay iyada leedahay.
Tusaale waxa loogu soo qaatay shaqaalenta dadka doonaya in ay la shaqeyaan Gudiga kuwaas oo intooda badan ay ku soo xulato qabiil.
Waxa isa soo taraya baritaan lagu sameeynayo hantida lagu dhunsaday magaca Gudiga Doorashadda. Dhanka kale waxa muuqata in ay aad u adkaan doonto in doorasho qof iyo cod ka dhacdo dalka Somaaliya marka la fiiriyo halka ay mareyso xaalada amni iyo mida siyaasadeed ee Soomaaliya.
Halkaan ka aqriso qoraalkii USAID
Previous articleEx Madaxweyne Xasan Sheekh oo kulan xasaasi ah la qaatay wax-garadka iyo aqoonyahanada Jubbaland
Next articleMasuul sare oo katirsan Somaliland oo is casilay